SJ oo 3 bilyan iyo bar ku maalgelineysa tareenada nooca SJ2000 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Fredrik Persson/TT.
SJ oo 3 bilyan iyo bar ku maalgelineysa tareenada nooca SJ2000
La daabacay torsdag 16 januari 2014 kl 14.25
Shirkadda gaadiidka tareenada ee loo soo gaabiyo SJ ayaa maalgelin ballaaran oo gaareysa saddex bilyan iyo bar ku sameyneysa cusbooneysiinta iyo waddooyinka tareenada lagu magacaabo SJ 2000. Sancada tareenada ayaa noqon doonta mid casri ah, halka gogosha tareenada laga dhigi doono kuwo cusub oo raaxo leh, sida ay sheegtay shirkadda SJ.
Marka hore waxaa la casriyeynaa sancada tareenada, kadibna qaabka fadhiga tareenada laga dhigi doonaa kuwo raaxo badan si dadka raacayaa ay u dareemaan in ay la socdaan ”tareen cusub”. Sidaasna waxaa agaasimaha guud ee shirkadda Crister Fritzson.
Maalgelintaani ayaa ah istaraajiyad wax ku ool ah oo tareenada dib loogu isticmaalayo si u wanaagsan bey’adda halkii laga dhisi lahaa tareeno cusub. Kadib marka tareenadaas dib loo habeeyo waxay tamarta ay isticmaalaan is-dhimi doontaa boqolkiiba 10.
Tareenka ugu horreeya ee nooca SJ 2000 wuxuu hawlgalayaa sannadka 2016.
Agaasimaha guud ee shirkadda SJ Crister Fritzson ayaa shir-jaraa’id ka sheegay:
- Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinku wargeliyo in ay shirkadda SJ sameyneyso maalgelinteedii ugu weyneyd ama laga yaabee ugu muhiimsaneyd muddo 150 sano ah. Waana maalgelin aad u ballaaran oo raacidda tareenada ka dhigi doonta mid mustaqbalka la socota. Waxaana ballanqaadeynna in tareenada cusub SJ2000 ay kaalin muhiim ah ka geli doonaan dhismaha guud ee dalka. Waxaan kaloo ballanqaadeynna in tareenadaani ay noqon doonaan tareenada ugu waqti safar yar Iswiidhen oo dhan.
Waxaa hawlahaan dib u dhiska loo xilsaaray shirkadda dhismaha ee ABB oo qalabka ay ku maalgeliso uu bixi doono in ku dhow hal bilyan iyo bar karoon. Qaybo ka mid ah waxasoosaarka dib-u-dhisiddaan lagu sameynayaa Iswiidhen.